Himalaya Dainik » यस्तो देविको मन्दिर मनले मागेको पुरा हुनसक्छ !
यस्तो देविको मन्दिर मनले मागेको पुरा हुनसक्छ !
यस्तो देविको मन्दिर जुन मन्दीरमा जे मनले माग्यो त्यहीँ पुरा हुने गर्दछ ! ॐ लेखि शक्दो शेयर गरौँ
स्थानीयवासी एवम् पुजारीले यहाँका पूजा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका छन् । पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएका मुख्य पुजारी तीर्थज्योति वज्राचार्य दैनिक सयौँ भक्तजन मन्दिरको दर्शन गर्न आउने भएकाले पूजाको व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने गरेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २१:५५